PressReader - Ilanga: 2017-10-30 - EZENDALO UNWABU
Ilanga - 2017-10-30 - Izindaba - LUTHOLAKALA KUPHI? ISIMO NOKUBUKEKA KWALO Amehlo Izinyawo Ulimi Umsila Umbala IMIKHUBA YEMPILO YALO Ukudla Ukuguquka kwemibala Ukuthwala amagciwane Ukuzalana kwalo
UNWABU yisilwane esidume ngokwenza kancane, ikakhulukazi ukuhamba njengoba lokho sekwaze kwangena ngisho esiZulwini, uma umuntu enza kancane kuye kuthiwe uyanwabuluka. Okunye okwaziwayo ngalo wukuguqula umbala walo ufane nowendawo olukuyona. Uma umuntu ekhuluma engathekisa, uyasho ukuthi omunye uguqula imibala njengonwabu nxa eqonde ukuthi lowo useshintshe umqondo kulokho abekushilo phambilini. Lesi silwane kakukho lutho olutheni esixhumana ngalo nempilo yabantu njengoba singadliwa. Abacwaningi besayensi bazilinganisela ema-202 izinhlobo zonwabu. Lonake balubiza ngeChamaeleonidae. Luyatholakala ngokwemvelo engxenyeni eseningizimu ye-Afrika ikakhulukazi eMadagascar, enyakatho ye-Afrika, eningizimu Europe, eMiddle East, eningizimu ye-India nakwezinye izindawo emahlathini lapho lina khona kakhulu, ogwadule nasezinkangala ze- savanna. Isikhathi esiningi unwabu lusichitha emithini futhi luvame ukuba ngaphandle kwasemanzini. Unwabu luyehluka ngobukhulu nesakhiwo somzimba, ngokuvamile olweduna lukhula lube phakathi kwe-15mm-68,5cm. izinhlobo eziningi zalo zinekhanda nobuso obuhlotshisiwe, isibonelo: umbombo unamazenga awumugqa. Ezinye izinhlobo njengeTrioceros jacksonii, zimila okusazimpondo, kokunye kube wumqhele njengoba kunjalo ohlotsheni lweChamaeleo calyptratus. Ezinhlotsheni eziningi insikazi neduna kubukeka ngokuhlukile - lapho amaduna ehlotshiswe kakhulu kunezinsikazi. Lusho ngezimbokodo zamehlo olukwazi ukuwa- gunquzisa abheke ezindaweni ezahlukene ngesikhathi esisodwa. Lokho kwenza lukwazi ukubona nxazonke (360 degrees) ngesikhathi esisodwa lungaliphendulanga ikhanda. “Izinyawo” zonwabu zidaleke ngendlela yokuba kube lula ukukhwela emthini. Onyaweni ngalunye kunamazwane abonakala kahle kodwa ahlangene aba yizindlawu ezimbili ezibizwa ngefascicles ngesiNgisi. Amazwani lawa ezinyaweni zangaphambili abhangqene aba mabili umhlathi wangaphandle kulolo “dlawu” bese owangaphakathi abhangqane abe mathathu.
Kwezangemuva izinyawo lokhu kuyaphambana, umhlathi ongaphakathi wodlawu uba namazwani abhangqene amabili kuthi ongaphandle abe mathathu.
Unyawo ngalunye lunozipho olulodwa olubukhali, olwenza unwabu lukwazi ukunonkela ngisho nasemaxolweni esihlahla lufike phezulu. Okunye okubabazekayo ngonwabu wukuthi nakuba lwaziwa ngokwenza izinto ngokunwabuluka, kodwa uma sekuza ekusebenziseni ulimi lushesha njengonyazi - uma selunqakathela izinambuzane. Ukushesha kokuphuma nokubuyela kwalo emuva kulinganiselwa ku-0,07 sec.
Ulimi lolu ubude balo lweluleka lube ngangobude bomzimba wonwabu, ungabaliwe umsila. Kubatshazwa ubude bolimi lwezinhlobo zezinwabu ezincane, lona luyaba ngangomzimba walo uphindwe kabili noma ngaphezulu! Ugolokoqo lomsila luluthandela emagatsheni ezihlahla ukuze lubambelele. Unwabu ludume ngokuguqula umbala ube njengalapho luhamba khona ngaleso sikhathi. Kusanda kutholakala ukuthi lunesikhumba esinolwebu olubili olulawula imibala. Uma kungekho okuluphazamisile, isikhumba siveza umbala oluhlaza noma oyisibhakabhaka. Uma lwethukile luyayixuba imiba la ophuzi, oyisibhakabhaka, osawolintshi noluhlaza. Unwabu lolu luyinkom’ edla yodwa. Empeleni kuthiwa isikhathi esiningi insikazi kayithandi ngisho nokuba iduna lisondele eduze kwayo. Uma kuthuke kwenzeka insikazi yathanda ukuba ithintwe, iduna liyasondela ngenhloso yokukhwelwana kuphela. Iduna elinombala okhanyayo yilo elinethuba elingcono kunelinombala ongagqamile ukuba livunyelwe ukukhwela insikazi. Ukudla konwabu okuhamba phambili yizinambuzane oluzibamba ngalo ulimi olusheshisa okonyazi. Kunohlobo olutholakala e-Arabia oludla izinyendle ezingabalelwa kwezili-15 kuya kwezingama-50 ngosuku. Unwabu olutholakala eKenya nasenyakatho yeTanzania ludla izinhlobo ezahlukene njengezintuthane, yizivemvane, amacimbi, yiminenke, nezinye izinwabu njalo njalo. E-Europe nasenyakatho ye-Afrika ludla izibawu, yizithwalambiza, yizintethe, yizimpukane nokunye. Kuthiwa luyacathama luze lube sebangeni elanele ukuba lugadle ngolimi lwalo. Amanzi amqoka empilweni yonwabu ukuze lukhule, luyawaxhapha ngolimi okwenja.
Ukuguquka kombala wonwabu kuthiwa kungenye
yezindlela zokuxhumana nezinye - ukukhombisa phakathi kokunye yintukuthelo, wukwesaba, kanjalo nezinguquko kwezinga lokushisa nelokukhanya nomswakama. Umbala okhanyayo ugqame kakhulu kolweduna futhi uyaziheha izinsikazi. Insikazi isebenzisa imibala ukwamukela noma ukuchitha “isesheli” kanti umbala lona ingakhombisa ngawo ukuthi imithi.
Unwabu kuyenzeka lube ngumthwali wezinambuzane eziwuhlupho njengamakhizane nomiyane. Olunye uhlobo lwezikelemu lufafazwa wunwabu uma ludle ukudla okuqukethe amaqanda azo bese izibungu zina- mathela emathunjini alo qede zidlulele egazini. Ngokuvamile unwabu luyazalela amaqanda amathathu kuye kwayisi-6 emuva kokukhwelwa. Insikazi igubha umgodi ojule ngama30cm, kuye ngolonwabu bese amaqanda lapho. hlobo lubeka a l Kunohlobo olukhulu okubikwa ukuthi luyawazalela amaqanda afike ema-20200. Ngokuvamile amaqanda achamusela emuva kwezinyanga ezine kuya kwezili-12. Zikhona nezinye izinhlobo awazo athatha izinyanga ezingama-24! Ezinye izinhlobo zonwabu ziqhubeka o nokukhula zize zife. Njalo nje nxa luba lukhulu, luyebuza kodwa hhayi njengenyoka eyebuza umzimba uphelele, lona kuba yizingxenye ezahlukene. Kunezinye izinhlobo ezizalayo emuva kokumitha izinyanga ezine kuya kweziyisi-6 kuphume “abantwana” abaphelele. Nabo
labo bantwana isuke insikazi ibafukamele besemaqandeni ngaphakathi esiswini esikhundleni sokuwazalela. Zikhona izinhlobo eziphila isikhathi esifushane njengezitholakala eMadagascar, okuthiwa amaqanda azo ziwachamusela ngoLwezi (November), abantwana bakhule baqede ngoMasingana (January), bazalele nabo ngoNhlolanja (February) bese sonke leso sizukulwane sife siphele emuva kwezinyanga ezintathu!
Umthombo ngabe: en.wikipedia. org